November 2013 - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
ဗိုလ် လှိုင်း at 10:48:00 AM 2
C-BOX တောင်းဆိုထားမှု့ကြောင့် တင်ပေးလိုက်တာပါနော်
အကိုပေါက်ဆိုဒ်မှာ မြင်သာအောင်တင်ထားတာရှိပါတယ် ရှာလို့မတွေ့တာလား လုပ်လို့အဆင်မပြေလို့
မေးထားတာလားတော့ မသိပါဘူး ဒါကြောင့်နောက်တနည်းလေးတင်ပေးတာပါ အမှားပါရင်နားလည်ပေးပါ
1. ကိုရွေးရင်တော့ ဖုန်းကို Root လုပ် မြန်မာဖောင့်နှင့် ကီးဘုတ်ထည့်ပေးမှာပါ။
2. ကိုရွေးရင်တော့ ဖုန်းကို Root မလုပ်ပဲ မြန်မာဖောင့်နှင့် ကီးဘုတ်ထည့်ပေးမှာပါ။
3. ကတော့ အပေါ်က ၁ နှင့် ၂ လုပ်လိုက်လို့ wifi error ဖြစ်ခဲ့ရင် ပြင်ဆင်ဖို့ပါ။
လုပ်ချင်တာကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ အလွယ်လေးရယ် Root လုပ်မယ်ဆို 1 လို့ပဲရိုတ်ထဲ့လိုက်
မြန်မာဖောင့်တော့ တန်းမရသေးဘူးနော် နောက်ထက်ဆော့ဝဲလေးနဲ့ ထက်လုပ်ပေးရအုန်းမှာ Font changer ဆော့ဝဲလေးကို ဒီမှာယူလိုက်နော် နောက်ဘားရှင်းအသစ်လေးတွေလည်း ထက်ထွက်နေပါပြီ
ဒါပေမယ့် ဒီဆော့ဝဲလေးကတော့ ကျွန်တော်လက်စွဲလေးပါ ဆော့ဝဲလေးကိုဖွင့်ပြီး Allow ဆိုတာကိုနှိပ်ပေး
ဗိုလ် လှိုင်း at 2:02:00 AM 3
ဖုန်းအဝင် အထွက်လေးတွေမှာ ဒဇိုင်းဆန်းဆန်းလေးတွေနဲ့ အသုံးပြုချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းအတွက် ကျွန်တော်
ဆော့ဝဲလေး ၅ခုပဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒါလေးတွေကိုအရင်စမ်းသပ်ကလိကြပါအုန်းနော် များလွန်းနေရင်
အသုံးပြုရတာ သူငယ်ချင်းတို့စိတ်ထဲ ရိုးသွားမှာစိုးလို့ နောက်မှထက်တင်ပေးအုန်းမယ် အခုတော့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ တော်မယ်နော် ဒေါင်းလုပ်ဆွဲမရရင်တော့နားလည်ပေးပါနော်
Windows Widget ဆော့ဖ်ဝဲများ
ဗိုလ် လှိုင်း at 1:59:00 AM 0
ဒီဆော့ဝဲလေးကတော့ Windows-8 သုံးနေတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက်ပါ ပုံပြထားပြီး ရှင်းပြနေရင်
ကျွန်တော်ဆရာကြီးလုပ်တယ်ထင်နေအုန်းမယ် ပြေားတော့ဘူးနော် ဒေါင်းသာကလိကြည့်တော့
Harris Nyi at 10:56:00 PM 1
How To Install Wordpress on local host(Ebook)
Taikkyi Thar at 10:51:00 PM 0
Wordpress ကိုစတင်အသုံးပြုချင်တဲ့သူတွေအတွက် ကျနော် ရေးသားထားတဲ့ Local host မှာ Wordpress ကို Install ပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးပါ။
ဗိုလ် လှိုင်း at 5:38:00 PM 2
ညက အလုပ်နည်းနည်းများသွားလို့ ပို့တစ်ခုပဲတင်လိုက်ဖြစ်တယ် ဒီညတော့ များများလေး တင်ပေးမယ်
လိုင်းကောင်းရင်ပေါ့နေား ဒီဆော့ဝဲလေးကတော့ windows 8 အတွက်ပါ ဘယ်လိုအသုံးပြုရလည်းဆိုရင်
start windows ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဘက်ဂရောင်း လှလှလေးတွေ ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲ
ကောင်းလေးပေါ့နော် Window-7 ထက်တောင်ပိုစုံသေးတယ်ဗျာ နောက်ထက်ကလိစရာလေးတွေလည်း
အများကြီးပါသေးတယ် ကိုယ်တိုင်ကလိမှ အခက်ခဲတွေမှ မှတ်မိမှာပေါ့နေား အားလုံးအဆင်ပြေရင်တော့
အကိုပေါက်ဆိုဒ်မှာ ဘာလုပ်ရမှာလည်း သိမှာပါနေား
Smadav 2013 Rev 9.5.1 Free Version ( သေးပေမယ့် Virus သတ်ရာမှာ အစွမ်းထက်တယ်. )
Maung Pauk at 5:25:00 PM 2
Windows PC လောကမှာ သေးသေးလေးနဲ့ သိပ်စွမ်းတဲ့ Antivirus တစ်မျိုးကိုရွေးပါဆိုရင် Smadav ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်.. Virus, Worm, Malware, Sality တွေနဲ့ အခြား Virus မျိုးကွဲပေါင်းများစွာကို ရှင်းလင်းပေးနိုင်ပါတယ်.. Hidden File တွေကို ပြန်ဖေါ်ပေးတယ်. Registry, Folder Option တွေပျောက်နေရင် ဒီကောင်လေးနဲ့ ပြန်ဖေါ်လို့ရတယ်.. Smadav က နိုဝင်ဘာ 28 ရက်နေ့မှာ Rev 9.5.1 ကို ဖြန့်ချိပါတယ်.. Free Version နဲ့ Pro Version နှစ်မျိုးပါ.. Pro Version ကိုတော့ နောက် ရက် အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ရနိုင်လောက်ပါတယ်.. ခုတော့ Free Version လေးနဲ့ ကျေနပ်ကြအုံးစို့.. Free Version ဆိုပေမယ့် အထင်မသေးပါနဲ့ ယခင်ဗားရှင်းထက် Database 152 မျိုး ထပ်ပေါင်းထားပြီး Virus အမျိုးပေါင်း 3759 မျိုးကို အမြစ်ဖြုတ်နိုင်တဲ့အပြင် ဆောင်ရွက်ချက် Signature စုစုပေါင်း 7912 ရှိပါတယ်..
4 main functions SmadAV:
Most antivirus software can not be installed with other antivirus, it is because the antivirus is designed for primary protection on your computer. In contrast to SmadAV, SmadAV is the type of antivirus are designed as additional protection, so 100% compatible and can work well although there has been another antivirus on your computer, in this case serves asalayer of defense SmadAV second. SmadAV has its own way (behavior, heuristic, and whitelisting) in detecting and cleaning viruses that will further enhance the security of the computer. Because the resource usage is very small SmadAV, SmadAV will not increase your computer's performance under heavy use. So, withamix between SmadAV and antivirus protection that is installed on your computer will further strengthen the defense of your computer from virus infection.
USB stick is one of the biggest media spread of the virus in Indonesia. SmadAV have special technology for total prevention of virus that spreads via USB stick. SmadAV mission is no longer 100% viral infection of the flash. SmadAV have enough signatures of viruses that infect the flash, and hasaspecial ability to detect new viruses in flash although not in the database SmadAV. Not only prevention, SmadAV also able to clean upavirus that infects and restore virus hidden files in the USB stick
SmadAV very well be used for computers that rarely or even not connected to the internet. SmadAV not need to update as often as other antivirus that usually do updates per week and even per day. SmadAV usually do updates only onceamonth (monthly). SmadAV not overly dependent on the signature / virus database, but much depends on the behavior detection techniques, heuristic, and whitelisting.
SmadAV also able to clean the virus that has infected your computer and fix registry altered by the virus. Other antivirus usually not done cleaning the registry so that the computer has not returned to normal after cleaning the antivirus. Many supporting tools that are included in SmadAV asaweapon for cleaning the virus. Note: Not all types of viruses can be cleaned SmadAV, SmadAV is still not able to clean the virus type or types of rootkits penginfeksi program (eg virus Ramnit, Sality, Alman, Virut, etc..) Because this strain has damaged most of your program files . Our focus at this time is due to the type of virus clearance in addition to the two types (eg: virus WormShortcut, Cervical, MSO, Brontok, etc..)
Rev. SmadAV 2013. 9.5 : Addition of new virus database 152,anew feature on the program SmadAV (Submitted Virus), Completion of cleanup techniques and virus protection.
27 seagames အ တွက် အလွန် အသုံး ဝင် တဲ့ application မ ရှိ မ ဖြစ် ဆောင် ထား သင့် တဲ့ အ ရာ လေး နော်
Kyaw Myo Tun at 6:37:00 AM 13
အား လုံး မင်္ဂလာ ပါ ခင် ဗျာ ဗမာ ပြည့် မှာ နေ ထိုင် ပြီး 27 seagame အ တွက် ဒီ apk လေး တင် ပေး လိုက် ရ တဲ့ အ တွက် ကျွန် တော် အ ရမ်း ဝမ်း သာ မိ ပါ တယ် ခင် ဗျာဒါ လေး ကို upload တင် ချိန် မှာ အ ခက် အ ခဲ သုံးကြိမ် တိုင် တိုင် တွေ ရ ပြီး မ တင် ဖြစ် မှာ လည်း စိုး ရိမ် ဖြစ် ခဲ့ ပါ တယ်ဒါ ကြောင့် မနက် ၃နာ ရီ ထ ပြီး upload တင် ခဲ့ တာ အောင် မြင် ခဲ့ ပါ တယ် ဒီapplication လေး မှာ နည်း နည်း ရှင်း ပြ ပေါ့ မယ်
အားကစားပေါင်းဘယ် နှစ်မျိုး ပါ သ လဲဆို တာ ပုံ နှင့် တ ကွပြသ ပေး ပြီး က စား မယ့် ရက် စွဲ လည်း ပါ ပါ တယ် ခင် ဗျာ
ကတော့ locations များ ကို photos များ နဲ့ ပြ သ ပေး ထား ပါ တယ် ခင် ဗျားးးးး
မြေ ပုံ က တော့MANDALAY,NAYPYIYAW,NGWESAUNG,YANGONတွေ ရဲ့ အ ဆောက် အ အုံ တွေ ကို online နဲ့လည်း ကြည့် ရှု နိုင် ပြီး offline မှာ လည်း ကြည့် ရှု နိုင် ရန် လည်း ပုံ နှင့် တ ကွ ပြ သ ထား ပါ တယ် ခင် ဗျားးးး
(7)Video && Songs
seagame အ တွက် ဖန် တီး ထား တဲ့ video တွေ song တွေ ကို internet ဖွင့် ပြီး နား ထောင် နိုင် ပါ ပြီး ခင် ဗျားးးးး
27 seagames မှာ အသစ် ပါ ရှိ တဲ့ အား က စား တစ် ခု က တော့ မြန်မာ ခြင်းလုံး ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ခင် ဗျာ Download နှိပ် ပြီး ဆော့ ကစား နိုင် ပါ တယ် ဗျားးးးး
Image က တော့ 1 to 66 ပုံ ပါ ပါ တယ်အား က စား ကွင်း နေ ရာ လေး နေ ရာ လုံး ပုံ နဲ့ ကြည့် ရူ နိုင် ပါ တယ်ခင် ဗျားးးးးး
ကျွန် တော် ပြော ချင် တာ က တော့ ဒီ APK လေး ကို ဆောင် ထား သင့် ပါ တယ် ဘာ ကြောင့် ဆို တော့ ဗမာ ပြည် အတွက် ပထမ ပြိုင် ပွဲလည်း ဖြစ် ပါ တယ်းးးးးးယူ ချင် ရင် အောက် ကို နှိပ် ပါ ခင် ဗျားးးး
အ ဆင် မ ပြေ လျင် comment ရေး ပေး နိုင် ပါ တယ် အမြဲ တမ်း စေ တ နာ ထား လျက်
Copy and Transfer ဆော့ဖ်ဝဲများ
Copy အရမ်းမြန်တဲ့ Extreme Copy
ဗိုလ် လှိုင်း at 6:12:00 AM 6
ဒီဆော့ဝဲလေးကတော့ ကော်ပီကူတဲ့နေရာမှာတော့ super copy ,type copy ဆော့ဝဲတွေထက် နှစ်ဆလောက်မြန်တယ်ဗျာ ကျွန်တော်စမ်းသုံးကြည့်ပြီးပါပြီး အရန်းကောင်းတယ်
copy ကူးတဲ့နေရာမှာ အချိန်အကြာကြီးစောင့်ဆိုင်း နေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဗျာ အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ် အကိုပေါက်အတွက် click တစ်ချက်အားပေးခဲ့ပါအုန်းနော်
Password = www.kuyhaa-android19.com
DotA v6.78c Map (June 2013 release)
Myanmar IT Sky at 2:30:00 AM 3
နောက်ဆုံးထွက် Dota Map ကို နောင်တော်ကြီး ကိုမင်းစိုးရာဇာ ဆီမှာ
တွေ့လို့ မ လာပါတယ်ခင်ဗျာ. Dota ချစ်သူများအတွက် နောက်ဆုံးထွက်
Apple Fonts iOS Software Mobile Fonts Phone Application
iOS7တွင် Me Note Keyboard ဖြင့် မြန်မာလိုရိုက်နိုင်ပြီ
ပါဠိစကားလုံးများကိုပါ အလွယ်တကူရေးသားနိုင်မည့် မြန်မာစာစနစ်ပါဝင်သည့် Me Note Keyboard ကို Apple Store ပေါ်တွင် အခမဲ့ Donwload ရယူသုံးစွဲနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း Application ကို ရေးဆွဲထားသည့် Microsoft.Net Developer တစ်ဦးလည်းဖြစ်၊ Sundew Myanmar Co.,Ltd ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်လည်းဖြစ်သော ကိုထွန်းလင်းထံမှ သိရသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ရက်အနည်းငယ်ခန့်ကမှ စတင်အသုံးပြုနိုင်ခဲ့သည့် ဇော်ဂျီမြန်မာစာစနစ်သုံး Me Note Myanmar ၏ Keyboard Application တွင် စာပို့စနစ်ပါ ပါဝင်လာတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။ “ကျွန်တော်က Microsoft.Net Developer တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် Apple User မြန်မာတွေ မြန်မာကီးဘုတ်ကို အခမဲ့သုံးနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပါ” ဟု ၎င်းကပြောသည်။ လတ်တလောတွင် အဆိုပါအခမဲ့မြန်မာစာကီးဘုတ်စနစ်ကို Facebook, Twitter နှင့် Email များနှင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး Facebook တွင် Comment ပေးနိုင်ရန်အတွက် မြန်မာ Facebook Application တစ်ခုရေးနိုင်ရန်လည်း စီစဉ်နေသည်ဟု ၎င်းကပြောသည်။ Apple Store ပေါ်တွင် အခမဲ့စတင်ဖြန့်ချိခဲ့သည့်နေ့မှ ယခုအချိန်အထိ Download ရယူသုံးစွဲသူအရေအတွက်မှာ တစ်ထောင့်ခုနှစ်ရာကျော်အထိ ရှိလာပြီဖြစ်သည်။ ယခုထွက်ရှိသည့် Me Note Myanmar Keyboard နှင့်ပတ်သက်သည့် Source Code ကို လိုအပ်သူများသည် wizard.htoon@gmail.com သို့ အီးမေးလ်မှတစ်ဆင့် ပေးပို့တောင်းဆိုနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
Credit : ITJ..
Myanmar Keyboard for all of i-Devices. Myanmar Keyboard is clean and smart by zawgyi layout. Special features _
- Social Sharing (Twitter, Facebook)
Download Link : https://itunes.apple.com/sg/app/me-note/id743873892?mt=8
Android ပြဿနာ Huawei Phone Application နည်းလမ်းများ
C8815 network unlock & offical firmware install setup2error
ဗိုလ် လှိုင်း at 5:35:00 AM 1
Huawei c8815 တွေမှာ firmware တင်တဲ့အခါမှာ setup2အဆင့်မှာ error တတ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းများ
network unlock လုပ်ချင်းသူများ ဆော့ဝဲလေးကိုဒေါင်းပြီး zip ဖိုင်လေးကိုဖြေလိုက်ပါ အထဲမှာ သက်ဆိုင်software ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီး run ပေးလိုက်ယုံပါပဲ အဆင်မပြေတာရှိရင်ပြေားထားခဲ့ပါ
ဗိုလ် လှိုင်း at 5:25:00 AM 13
HUAWEI Firmware များစုစည်းတင်ပေးလိုက်ပါ လိုအပ်တာတွေးရှိရင်လည်း ပြေားထားပေးခဲ့ကြပါ မဆဲပါနှင့်နော် လိုအပ်ချက်တိုင်းကိုတော့ မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လို့ပါ အောက်မှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီး
Y300-Android 4.1,Emotion B175
HUAWEI Ascend G510(Android 4.1,Emotion_UI,V100R001C151B165)
huawei C8815 ANDROID 4.1
BO HLAING at 1:36:00 AM 0
Windows -8 မှာ gadet လေးတွေထားချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် အသုံးပြုလို့ရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် အရန်လှပါတယ် လိုအပ်တာလေးတွေလည်း ထက်ပြီးဒေါင်လုပ်ဆွဲနိုင်ပါတယ်
အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ် အခက်ခဲရှိရင် ယဉ်ကျေးစွာနဲ့ ပြေားထားခဲ့ပေးပါရန်
BO HLAING at 1:08:00 AM 6
Huawei G610-u00 firmware လေးပါ အကိုပေါက် c-box မှာတောင်းဆိုထားတာတွေ့လို့ကျန်တော်
တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒေါင်းလုပ်အဆင်မပြေရင် နာလည်ပေးပါ
BO HLAING at 12:42:00 AM 0
Android ဖုန်း setting ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ လေ့လာကြည့်မယ် မသိတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ရည်ရွယ်လျှက် ကျွန်တော်ပြေားပြပေးတာပါ ကျွန်တော်တပည့်အဆင့်ပါ ယခုခေတ်အနေနှင့် ဖုန်းတွေလူတိုင် ကိုင်နိုင်နေကြပါပြီ ရန်ဖြစ်ရင်တောင် ဖုန်းနဲ့ကောက်ပေါက်လို့ ရနေတဲ့အဆင်ဖြစ်နေပါပြီ
ကျွန်တော်တို့ setting ပိုင်ကိုလေ့လာခြင်းကတော့ မလုပ်သင့်တာနှင့် လုပ်သင့်တာတွေးပေါ့ဗျာ သိစေချင်လို့ပါ လေ့လာကြည့်ရအောင်အကုန်လုံးကြီးတော့ မပြေားတော့ဘူးဗျာ လွယ်တာလေးတွေ
ဖုန်း setting/About Phone / ကိုဝင်လေ့လာမယ်
System Update = ဒါကတော့ ယခုလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ Android version ကိုမြင်တင်တာပါ အင်တာနက်လိုင်းကောင်းရင်တော့ အဆင်ပြေပါတယ် ကျွမ်းကျင်တော့လုပ်ပေါ့ သိပ်မသိသေးရင်တော့
မလုပ်ပါနဲ့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Error တွေအဖြစ်များပါတယ် ကျန်တော် တော်တော်များများ ကြုံတွေ့
နေရလို့ပါ အဲ့ဒီကနေမြင့်လိုက်တယ် ဖုန်းလာရင် ဖုန်းကကိုင်မရတာ bluetooth ဆက်သွယ်လို့မရတာ
တော်တော်များများတွေ့ပါတယ် ဆရာတွေရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေထဲမှာတော့ ကွန်ပျူတာနှင့် ဘာရှင်းမြင့်
တာပိုကောင်းပါတယ်လို့ ပြေားထားပါတယ် ကွန်ပျူတာနှင့်မြင်တာက အနည်းငယ်ဖြေဖြေခြင်း ဗာရှင်းမြင့်ပေးတဲ့အတွက် Error ကင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ် ဗာရှင်းမြင့်လို့ အောင်မြင်သွားခဲ့ရင်တောင် သူငယ်ချင်းအနေနှင့် ROOT ပြန်ဖောက်ရမယ် Application တွေပြန်ထဲ့ပေးရမယ် အလုပ်တော်တော်ရှုပ်မှာပါ နာလည်တဲ့သူတွေအနေနှင့်ကတော့ အခက်အခဲမရှိပါဘူး
Android Version = ဒါကတော့ ဖုန်မြန်မာဖောင့်ရရှိဖို့အတွက် Root ဖောက်တော့မယ် ဆိုရင်တော့ ဒီကောင်ကိုကြည့်ပြီးမှ ဖောက်ရတာပါ ဥပမာ- သူငယ်ချင်းဖုန်းက ဒီနေရာမှာ 2.3.6 ဆိုပါတော့ game
တစ်ခုသွင်းမယ် ဒီနေရာကိုကြည့်ပြီး game ထဲ့သွင်းရပါတယ် သူငယ်ချင်း ဖုန်း 2.3.6 နှင့် ကိုက်ညီတဲ့ game ကိုထဲ့ပေးရမှာပါ game ကအရမ်းမြင့်နေရင်တော့ ဖုန်းက game ကဆော့လို့မပါဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Android Version နိမ့်နေလို့ပါ ဖုန်းဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့ Version အနိမ့်အမြင့်ကို ဒီနေရာမှာကြည့်ပြီး ရွေးချယ်ပါ ကိုယ်ကဘာအသုံးပြုချင်တာလည်း ဆော့ဝဲအမြင်ကြီးတွေ
အသုံးပြုချင်တယ် Game တွေအမြင့်တွေ ဆော့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Version4အထက်ကိုရွေးချယ်ရမှာ
ပေါနော် ဖုန်းဆက်ရုံသက်သက်ဆိုရင်တော့ 2,3,6 လည်းအသုံးပြုအနေတော်ပါပဲ
Model Number= ဒါကတော့ ဖုန်းရဲ့အမျိုးအစားပါပဲ ဖုန်းရဲ့ company တွေက ဖုန်းအမျိုးအစား အမည်တွေနှင့် တွဲပြီးတော့ Model Number တွေနှင့်တွဲပေးထားတတ်ပါတယ် (ဥပမာ-Galaxy Note ဆိုရင် N7000ဖြစ်ပြီး Galaxy S2 ဆိုရင် I9100G ဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့် Root ဖောက်တဲ့အခါတွေမှာ Kernel Upgrade file တွေကို အင်တာနက်မှာ ရှာဖွေတဲ့အခါ Model NO နဲ့ရှာဖွေရတာလွယ်ကူပါတယ်)
ဖုန်းကို မြန်မာစာရဖို့အတွက် Root ဖောက်မယ်ဆိုရင် ယခုဆိုရင် ကျွန်တော်အသုံးပြုနေတာ HUAWEI
ှမြန်မာဖောင့်အသုံးပြုဖို့အတွက် Root ဖောက်မယ် ROOT ဖောက်ဖို့အတွက် Model Number ကိုကြည့်ရပါမယ်ံHUAWEI G520-T10 ဒီလိုမျိုးတွေ့ရင်တော့ ဒီ Model number နှင့်ကိုတ်ညီတဲ့ Root Tool ကိုရှာဖွေပြီးတော့ Root ဖောက်ရမှာပါ
Kernal Version= ဒါကတော့ Android version လိုပါပဲ android version ပြောင်းသွားရင်တော့ သူလည်း
Build Number= Android ROM ပြောင်းသွားရင်တော့ ပြောင်းလည်းသွားပါတယ် အပေါ်နည်းတူပါပဲ
Stock ROM တွေတစ်ခုနှင့်တစ်ခု ကွာခြားမှုရှိမရှိကို စေဆေးနိုင်ပါတယ် နောက်ဖုန်း Setting မှာမပါတဲ့ သီသန့်ကိုယ်ပိုင် နံပတ်တွေကို ရှာဖွေလို့ရပါတယ် ဖုန်း Root လုပ်ဖို့အတွက် Bootloder Unlock လုပ်ဖို့အတွက် ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္မဏီရဲ့ Website မှာ Key တောင်းတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ warranty ကိစ္စတွေမှာ အသုံးအရန်းဝင်ပါတယ် ဖုန်းရဲ့ Product အစစ်ဟုတ်မဟုတ်ကို ဒီနံပတ်နှင့် ဖုန်းထုတ်တဲ့ website မှာစစ်ဆေးကြည့်လို့ပါတယ်
IMEI/MEID =ဒါကတော့ လွယ်လွယ်ပဲ သိပ်တော့ရှင်းပြမနေတော့ဘူး ဒီကောင်ကတော့ ဖုန်းအခိုးမခံရအောင် ကာကွယ်တဲ့နေရာတွေမှာ အသုံးပြုပါတယ် အမျိုးအစား ဘားရှင်းထက်တူကြနေပါစေ
ကုဒ်နံပတ်တွေကမတူညီပါဘူး ဒီနံပတ်တွေနဲ့ ဖုန်းကဒ်ကိုလော့ချတာပါ ဖုန်းကဒ်ကို တစ်ခြား ဟန်းဆက်ထဲကို ထဲ့ပြီးအသုံးပြုလို့မရပါဘူး ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဖုန်းကဒ်က ဖုန်းရဲ့ IMEI နံပတ်နှင့်
လော့ချထားခြင်ကြောင့်ပါ နောက်ပြီးဟန်ဆက်မှ IMEI နံပတ်ကို အလွတ်ရအောင်မှတ်ထားပေးရမှာပါ မသုံးစေချင်လို့ပိတ်တဲ့အခါ ထိုနံပတ်နှင့် ပိတ်ရတာပါ စမ်းကြည့်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ ကျန်တော်ပြေားပြပါမယ် အခုတော့ဒီလောက်သိရင် ကျေနပ်ပေးပါ
Set up card lock= ဒါလေးကလည်း အရေးကြီးပါတယ် ဖုန်းပြောက်သွားတဲ့အခါ ဖုန်းကဒ်ကို တစ်ခြားဟန်းဆက်မှာ အသုံးပြုမရအောင် လော့ချတာပါ တစ်ခြားဟန်းဆက်မှာ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့
ကိုယ်ပေးထားတဲ့ လျှို့ဝှတ်နံပတ်သိမှ ဖုန်းကဒ်ကိုသုံးခွင့်ရမှာပါ ကျွန်တော်တို့ ၂သိန်းတန် GSM ဖုန်းတွေမှာတော့ မှုသေ PIN Coad 12345 ပါ ဒါကိုမိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ နံပတ်ပြောင်းမှာပါ နှောင်တစ်ချိန်မှာ ပြောင်းတဲ့နံပတ်မမှတ်မရင်တော့ ဖုန်းကဒ်အသစ်တာ ထက်လျှောက်ရမှာပါ အသုံးပြုနည်းသိချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ ပြေားပြပေးပါမယ် ဘာအတွက်ဆိုတာ သိစေချင်လို့ပြေားပြပေးတာပါ
အိပ်ချင်ပြီ ဒီလောက်နဲ့နားမယ်နော် နောက်နေ့ထက်ဆက်မယ် အမှားပါရင်နားလည်ပေးပါ သိသမျှဝေမျှတာပါ ဆရာကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ ကြိုပြေားထားပြီးသားနော်
Maung Pauk at 8:20:00 PM 0
Facebook IT Knowledge
facebook ကို ဘာအတွက် သုံးမလဲ ?
Maung Pauk at 6:10:00 PM 0
ဒီနေ့ခေတ်အချိန်မှာ နည်းပညာများ ပြောင်းလဲတိုးတက်လာတာနဲ့ အမျှ ကမ္ဘာကြီးကို နေ့စဉ် ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်မှာလည်း ဒီနေ့ခေတ် အချိန်မှာ ဖုန်းတစ်လုံးရှိရင် အင်တာနက် သုံးလို့ ရနေပြီဆိုတော့ ရန်ကုန်မြို့ အပါအဝင် မြို့ကြီး၊ မြို့ငယ် တော်တော် များများမှာ အင်တာနက် သုံးတာ ရာခိုင်နှုန်းဟာ တိုးလို့လာနေပါတယ်။ အင်တာနက် သုံးစွဲကြတဲ့သူတွေ တော်တော် များများဟာ အခုချိန်မှာ facebook ကို သုံးစွဲနေကြပါပြီ၊ မာ့ခ်ဇူကာဘတ်ဆိုတဲ့ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားလူငယ်လေး တစ်ယောက်နဲ့ သူ့ရဲ့ သူငယ်ငယ်ချင်း တစ်ယောက်ယောက် က ကျောင်းသား အချင်းအချင်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကြား မှာ သုံးစွဲနိုင်ဖို့ ဖန်တီးခဲ့ရာက အစပြုပြီး နောက်ပိုင်း မှာတော့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ ကြားတွင် သာမက အခုအချိန်မှာတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို လွှမ်းမိုး ထားနိုင်ပါပြီ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိတဲ့လူ ၁၄ ယောက်မှာ ၁ ယောက်နှုန်းစီ facebook ကို သုံးစွဲနေကြပြီး မိနစ် ၂၀ တိုင်းမှာ Status Update ၁.၈၅၁ သန်းရောက်ရှိ တယ်လို့ facebook စစ်တမ်းက ဆိုပါတယ်။
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အသိအကျွမ်းဖြစ်ကြပြီဆိုရင် facebook account ကိုတောင်းလေ့ရှိ လာကြပါတယ်။ လိပ်စာကဒ်တွေမှာလည်း Email အပြင် facebook address ကိုပါထည့်သွင်းလာ ကြတာကို တွေ့ရမှာပါ။ facebook သုံးစွဲသူတိုင်းဟာ နေ့တိုင်း Status Update မတက်ရင်တောင်မှ ခဏတဖြုတ် လောက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဝင်ပြီး check လေ့ရှိတာ အကျင့်တစ်ခုလို ဖြစ်နေပါတယ်။ နေ့စဉ် လူမှုဘဝမှာ facebook က တော်တော်လေး လွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ facebook သုံးစွဲသူတွေဟာ ရည်ရွယ်ချက် အမျိုးမျိုးနဲ့ သုံးစွဲကြပါတယ်။ facebook ကြောင့် အကျိုးရတဲ့သူတွေ ရှိသလို၊ facebook ကြောင့် ပြဿနာတက် ကြသူတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ၊ facebook ကြောင့် ထင်ရှားအောင်မြင်လာသူတွေ ရှိသလို၊ facebook ကြောင့်ပဲ အပြောအဆိုခံရသူတွေ ရှိပါတယ်။
နန်းခင်ဇေယျာ က အစပြုပြီး ခင်ဝင့်ဝါ၊ ထားထက်ထက် အထိ Miss Popular, Miss Internet ဆုတွေရခဲ့ကြတာ facebook က တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပါဝင်ပါတယ်။ အကြော်ရောင်းရတဲ့ နန်းမီမီမိုးစက်၊ သုတ/ရသ အမျိုးမျိုးနဲ့ သမီးဆိုး၊ လဲ … လဲ … လဲ … လဲ … နစ်ကီဘိုမင်းအောင်၊ ရှင်နော် … ရှင်ရယ် ဆိုတဲ့ မေမြတ်မွန်၊ တောင်းရမ်းစားနေရတဲ့ ဘဝက အဆင်ပြေသွားတဲ့ တော်လှန်ရေး ရဲဘော်ဟောင်းကြီး သခင်လှကြိုင် စတဲ့စတဲ့ သူတွေကို facebook က အဓိက အခန်းကဏ္ဍက ပံ့ပိုး ခဲ့ပါတယ်။ Personal Account တွေသာမက လူအများ စိတ်ဝင်စားကြတဲ့ Page တွေလည်း အများကြီးပါ။ facebook ကို အကြောင်းအမျိုးမျိုး နဲ့ သုံးနေကြတဲ့ အထဲမှာ အရည်မရ အဖတ်မရတွေလည်း ရှိသလို၊ တကယ်အသုံး တည့်တဲ့ အသုံးဝင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို စေတနာနဲ့ အချိန်ကုန်၊ ငွေကုန်ခံပြီး မျှဝေပေးနေကြတဲ့ Personal Account တွေ၊ Page တွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ ကွန်ပြူတာ နည်းပညာ၊ ကျန်းမာရေး၊ အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဆိုင်ရာ၊ စာပေရေးရာ အစရှိတဲ့ လေ့လာ ကိုယ်လိုချင်တာကို လေ့လာမှတ်သားနိုင်တဲ့ နေရာတွေလည်း facebook ပေါ်မှာ တော်တော်များလာ နေပါပြီ။
ဒါကြောင့် facebook သုံးတာ မကောင်းဘူးလို့ ပြောဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ နေရာတိုင်းမှာ အကောင်းနဲ့ အဆိုး ဒွန်တွဲနေတာ လောကဓမ္မတာ ပါ။ သုံးစွဲသူရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် နေ့တိုင်းလောက်နီးပါ သုံးဖြစ်နေတဲ့ facebook က တစ်ခုခု အကျိုးရအောင် လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဘာတွေရနိုင်လဲ … Learning လုပ်ချင်သူတွေ အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ပညာရပ်အလိုက် ပုံမှန်တင်ပေးနေတဲ့ Account တွေ၊ Page တွေကနေ လေ့လာ မှတ်သားနိုင်ပါတယ်။ စာပေဝါသနာရှင်တွေ အနေနဲ့လည်း အခမဲ့ တင်ပေးနေတဲ့ စာပေဆိုင်ရာ Page တွေက စာအုပ်တွေဖတ်လို့ရပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့စာပေ အစွမ်းအစကို facebook ကဆင့် ဖော်ပြနိုင်ကြပါတယ်။ ဂီတကို ဝါသနာပါတဲ့သူတွေ အတွက်လည်း ကိုယ်ရဲ့ ဂီတကို facebook ကနေ ပရိတ်သတ်ကို မိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။
facebook သုံးစွဲသူတွေဟာ ကိုယ်ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာ အမျိုးမျိုးကို Status တွေတင်ကြ ပါတယ်။ အဲဒီ Status တွေကပဲ ကိုယ့်ရဲ့ Personality ကိုယ့်ရဲ့ Image ကို တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ ကိုယ်တင်နေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ Status တွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ဓါတ် တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ဖော်ပြနေပါတယ်။ ကိုယ်ရဲ့ အတွေးအခေါ်ကို အယူအဆတွေရဲ့ တစ်စွန်းတစ်စကို လှစ်ဟ ပြနေပါတယ်။ ကိုယ်ရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ဖော်ပြနေပါတယ်။ အဲဒီ Status တွေကြောင့် မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း ကောင်းတွေရနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီအတွက်ကြောင့် facebook သုံးစွဲသူ လူငယ်တွေ အနေနဲ့ facebook ကို Learning area တစ်ခု အဖြစ် သုံးစွဲစေချင်ပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့၊ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ Career တစ်ခုခု ကို အစပြုနိုင်ဖို့ facebook သုံးရင်း လေ့လာပြီး၊ facebook ကပဲ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်စွမ်း ကိုယ်စကို စတင်မိတ်ဆက်ပါ။ ချက်ချင်းတော့ ကိုယ့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက သတိထားမိချင်မှ ထားမိပါလိမ့်မယ်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ရှည်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ်တင်နေတဲ့ status တွေကို စေတနာထားပြီး စိတ်ရှည် လက်ရှည်နဲ့ တင်ကြည့်ပါ၊ တကယ် အကျိုးရှိတယ်၊ တကယ်ကောင်းတယ်ဆိုရင် တောင်းစရာမလိုဘဲ Like တွေ ရလာပါမယ်။ အဲဒီကဆင့် Share တွေများလာပြီ ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ Personality ကိုယ့်ရဲ့ Image ကို လူတွေက စပြီးတော့ သတိထား မိလာမှာပါ။ အဲဒီ Image ကို ခိုင်မြဲအောင် တည်ဆောက်နိုင်မယ်ဆိုရင် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်မယ့် အချိန်မှာ ကိုယ်က Quality ရော Image မှာ ခိုင်မာနေပြီဆိုရင် ကိုယ့်အတွက် အခွင့်အလမ်း ပိုများပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ facebook ကို နေ့တိုင်းလောက် နီးပါး သုံးဖြစ်နေတဲ့ကြတဲ့ facebook user တွေအနေနဲ့ အကျိုးမရှိ အချိန်ကုန်သွားမယ့် အစား ကိုယ့်အတွက် အကျိုးတစ်ခုခုရရှိအောင် ဘာအတွက် သုံးမှာလဲ ? ဘယ်လို သုံးမှာလဲ ? ဆိုတဲ့ အတွေးလေးတစ်ခု ထားစေချင်ပါတယ်။ အဲဒီအတွေးကနေ အဖြေတစ်ခု ရပြီဆိုရင် အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကို facebook က သုံးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ facebook ကို ကိုယ်က အသုံးချနိုင်ကြပါစေ ……